Kubiza malini ukuvula ikliniki? Umhlahlandlela wezindleko zokuvula ibhizinisi le-cannabis.
Ufuna Ukuvula I-Dispensary?
Kubiza malini ukuvula iziko lokuhlinzeka ngemithi?
Ukuvula a Isikhalazo seCannabis e-Illinois kuzoba eqolo ngenxa yezindleko zokuphepha, izidingo zemali, amalayisense, ukubonisana nezindleko zomthetho, konke okuqhubeka nokusebenza kwenkampani yakho.
Zilungiselele futhi wenze iqembu elikhulu necebo lebhizinisi futhi uthole abeluleki abafanele nezinsizakusebenza zempumelelo yakho.
Ochwepheshe esikhulume nabo bakholelwa ukuthi izindleko zokuvula ibhizinisi lakho le-cannabis e-Illinois zizoba phakathi kwama- $ 400,000 kuya ku- $ 1,000,000 ekhishini - kanye ne- $ 6.5 million kuya ku- $ 10 million yobuciko obukhulayo, kuya ngendawo nosayizi wamaphakethe wokwakha.
Zonke izifunda zihlukile, kepha uma ufuna ukuvula i-dispensary noma zikhule e-Illinois, imithethonqubo kanye nenani elilinganiselwe lamalayisense lifaka izindleko kakhulu kunezizwe ezingancintisani.
Ziyini izindleko zokuvula i-cannabis dispensary?
Nakhu Isifinyezo esifushane sokuqalisa Izindleko zokuvula i-cannabis dispensary, noma ubuciko bukhula e-Illinois:
Izimali Zokubala Imali Nezinye Izazi
Izakhiwo ezithengiswayo nezindleko zokuqasha ezingaguquki
Izindleko ze-Flower & Inventory
Kuchazwa Izindleko Zokuvula Ibhizinisi Lensangu
Lezi ziqonde kakhulu kuzo zonke izindleko zakho - imali oyikhokhayo esifundazweni sase-Illinois. Banikezwa ngesimiso futhi banenombolo eyodwa. Kufile okulula ukufaka kwisabelomali sakho, kepha lokho kumane kuyizindleko zamanzi zebhizinisi lakho le-cannabis kubiza ukuthi zikhule.
Izindleko zokuqalisa nendawo okuyo i-Cannabis Dispensary yakho
Ingcebo imayelana nendawo, ngakho-ke lapho uvula khona izindaba zebhizinisi lakho le-cannabis. Qasha, ngoba ibhizinisi le-cannabis alikwazi ukubambelela ngempahla yabo indawo ethengiswayo, ingumshayeli ophambili wento enkulu yesabelomali sebhizinisi lakho le-cannabis.
Izakhiwo ze-cannabis zivame ukubhekiswa "endaweni eluhlaza"
Kungakanani ukuvula isikweleti njengomqashi oqashisayo?
Ngokwengeziwe, izindaba zokuphepha maqondana nendawo okuyo ingcebo yakho kufanele ihlolwe futhi kukhulunywe ngayo kuhlelo lwakho lokusebenza ngoba ukuphepha kungamaphoyinti amakhulu ngaphansi kokuthola amaphuzu. Kanjalo nokuphuma nokwakhiwa kwezici zokuphepha kuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe ebhizinisini lakho lokukhipha noma lokukhulisa ibhizinisi, okungekho eminyene kangako ezifundazweni ezisogwini olusentshonalanga.
Izindleko zefenisha, zalapho zisebenza khona kanye nemishini yokusebenza (i-FF & E) e-Illinois zihamba phezulu ngenxa yezinga eliqinile lokuphepha elakhelwe emthethweni ukuvimbela ukuphanjaniswa kwensangu ekuthengisweni kwempahla, noma ukuphangwa kwemali kuphela kwabantu abadala abasebenzisa ibhizinisi le-cannabis.
Abaluleki bazokusiza ukuthi uhlanganise wakho isicelo selayisense se-cannabis, uhlelo lwebhizinisi, izinhlelo zezezimali, izinhlelo zokuphepha, izinhlelo zokulingana kwezenhlalo, nezinye izinto eziningi. Isicelo esigcwalisiwe sizofana nalokho okwakwaziwa ngekhulu lama-20 ngokuthi “yincwadi yezincingo.” Le nkulumo isho ukuthi inqwaba yamaphepha avela kuhlelo lokusebenza lokushaya amagoli aphezulu izoba yinhle, mhlawumbe ibe ngamakhulu amakhasi.
Isizathu sobude besicelo sihlobene nezethembiso ezenziwa yibhizinisi lakho le-cannabis ku-State of Illinois (nasezweni lakho uma ukwenye indawo) kusicelo salo.
Lapho kunikezwa ilayisense yokutshala noma ukukhipha insangu kubhizinisi lakho, khona-ke yonke imigomo nemibandela nezithembiso eziphathelene nebhizinisi lakho le-cannabis ozenzile kuhlelo lokusebenza empeleni ziba izidingo zokusebenzisa ibhizinisi lakho!
Isicelo sakho sidinga izinqubomgomo zokuqeqeshwa kwabasebenzi, izinhlelo zokufinyelela emphakathini, ukwakhiwa kwezokuphepha kanye nezivumelwano, ukusebenza okuyinkimbinkimbi kwezinkampani, ubunikazi nezinkontileka zezezimali, nezinhlelo ezibalulekile zokugcina amarekhodi nezinqubo ezisetshenzisiwe ekukhuliseni noma ekuthengiseni insangu yabantu abadala.
Alikho elinye ibhizinisi elinokuhlelwa kwangaphambili okuningi kangaka okuya ekunikezelweni kwelayisense lokuvula iminyango yalo.
Inqubo yokufaka Isicelo ingabiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi futhi izocaciswa ngokuphelele ngezansi. Into ebalulekile ibhizinisi lakho elingayenza lapho uzibeka engcupheni yokufaka isicelo selayisense layo ukuthi okungenani uthenge isicelo esihle.
I-Illinois inezihlalo ezimbalwa kakhulu ezivulekele igagasi lokuqala lomkhakha. Mhlawumbe uzokwenza igagasi lokuqala, noma elelesibili, noma lesithathu.
Uhlelo lwebhizinisi le-Cannabis (Ithimba) Lingalawula Izindleko Zokuqalisa
Ngubani opharetha wakho? Njengoba kungenzeka ungizwile ngasho ngaphambili ku-Cannabis Legalization News (NgoLwesithathu @ 2 pm CST), imboni ye-cannabis ngumdlalo weqembu - kunezindlela eziningi inkampani yakho engangeza ngazo noma ikhiphe inani kulesi sitshalo. Lapho uhlela uhlelo lwakho lwebhizinisi, sebenzisa lokhu kucabanga kwethimba lapho uhlanganisa: isiko lakho, abaluleki bakho bezomthetho, intela, ezokuphepha nabasebenza, abatshalizimali bakho, namakhasimende akho.
I-Illinois ingeza umbimbi omusha ezinhlelweni zebhizinisi lendabuko le-cannabis ezivela kwezinye izifundazwe zokusebenzisa abantu abadala - ukulingana kwezenhlalo. Ungasebenzisa izinhloso zokulingana kwezenhlalo ukuvula imboni ye-cannabis kulabo abathintwe kabi yimithetho yezidakamizwa kule minyaka engama-80 edlule. Mhlawumbe inkampani yakho ye-cannabis izokwenza uhlelo lokuqasha abafakizicelo bezenhlalakahle abayishumi ngokugcwele ukuze ibhizinisi lakho liziqhenye ngokuziqhenya ngokusiza ukufeza izinhloso zombuso emthethweni wawo omusha wokusebenzisa abantu abadala.
Vele, uhlelo lwebhizinisi kufanele lube nokuqagela kwemali yendabuko nezindleko, kanye nohlelo lwezimali olunolwazi noma i-CPA ngokudayisa kwangaphambilini, futhi ngethemba ukuthi insangu, isipiliyoni sizotholela inkampani yakho izibalo ezithembeke kakhulu. Izinhlelo zebhizinisi le-cannabis, ngokungafani nezinhlelo zebhizinisi ze-plain-vanilla, imvamisa zidinga ukubhekana nezici zebhizinisi ezivela ekulandeleni umthetho.
Isibonelo, uzoba nezindleko zokuhambisana nokuqinisekisa ukuthi imisebenzi yakho ihambisana nemithetho emisha neguqukayo ekusebenzeni kwayo, nokuthi lokho kubhekwana nakho ngesoftware noma ngabasebenzi kungachazwa kanjani.
Ukuphepha akusho nje ukuthi ube nomuntu onesidlakela ophethe isibhamu. Ezokuphepha zihlanganisa ubuchwepheshe, ukwakheka kwesakhiwo, kanye nezenzo ezinhle zokubhekwa komthetho zokusebenzisa uhlelo lokuthi uma kukhona okungahambi kahle, ngubani owenzile, lapho kwenziwa, nokuthi kwenzekeni konke konke kufakwa encazelweni ephezulu, ephrintiwe, futhi enikezwa ngokushesha emthethweni abomthetho.
Uhlelo Lokugcina Amarekhodi Ukuvimbela Ukuphambukiswa Kwensangu noma Izindleko Zemali
Izinkampani eziningi zine-software yobunikazi eyavela ngaphambi kokuthi i-Illinois ibe yisimo se-cannabis yezokwelapha. Lawa ngamabhizinisi asizayo avunayo njengoba insangu iba yibhizinisi elisemthethweni. Iyiphi isoftware oyisebenzisayo ukulandelela ukunikezwa kwakho nokuthengiswa komkhiqizo kuzoncika kumxhumanisi owukhethile. Awufuni ukuthi uhlelo lwakho lwePoint of Sale (POS) lube ngokoqobo, kahle, i-POS.
Uma wakho uhlelo lwebhizinisi le-cannabis kufaka phakathi ukuthuthukiswa kwalobu buchwepheshe ezinhlelweni zayo zeminyaka emihlanu zokwenza eminye imifudlana engenayo ngokuthengisa amalayisense walokho okwakhayo, lapho-ke kufanele ungishayele ngaphandle kokuthi ucabanga ukubenza ku-C #. Ngemuva kwalokho ungaqasha omunye umuntu noma unikeze isizathu esinemininingwane sokukhetha kwakho lolo limi.
Amapulani nezinqubomgomo zokuqeqeshwa kwabasebenzi kufanele futhi ube nemikhuba emihle kakhulu enikezela ukugcinwa kwerekhodi okunembile kwensangu yakho. Lezi zinqubo kufanele zilandelwe, futhi zifake ukuqeqeshwa nganoma iyiphi isoftware inkampani yakho enqume ukuhamba nayo ukusiza ukulandelela uhlu lwayo nokuthengisa.
Ukujwayelana nezinhlelo zakho kubalulekile ukuvimbela i-cannabis ekuphambukisweni ku-supply chain, noma ekhohlakele ngokuthatha isikhala seshalofu nomkhiqizo obekufanele ukhishwe ngokushesha.
Amandla Ezezimali Okuklama, Ukwakha Nokusebenzisa Ibhizinisi Lensangu
Isicelo sokuthola ilayisense lakho lokutshala noma lokukhipha insangu sifaka phakathi imiklamo eminingi nezinhlelo zesikhungo sakho futhi mhlawumbe nokupakisha umkhiqizo nokulebula kwawo. Abaqambi babaluleke kakhulu esithombeni futhi babukeka sengathi bangadlulisela umkhiqizo wakho omusha we-cannabis. Ngakho-ke ukubenza baklame ukwakheka kwempahla yakho yangempela, noma ukufakwa komkhiqizo ngeke kushibhile. Kepha uma uhlelo lwakho lokusebenza luphumelela, kuba kubiza kakhulu ngoba amadizayini manje adinga ukwakhiwa nokuqashwa.
Ngokufinyelela noma ngaphandle kokuthola imali mboleko kanye nezibonelelo ezitholakalayo "kubafakizicelo abafanelekile bokulingana kwezenhlalo," wonke amabhizinisi anelayisense anamalayisense adinga ukukhombisa amandla awo wezezimali ukulandela amapulani abo futhi awenze abe yiqiniso. Lezo zindleko zicacisiwe futhi ziyingqayizivele kumkhiqizo wakho othile, ukwakheka kwawo, nendawo okuyo ingcebo.
Incwajana Yabasebenzi Nezinqubomgomo Zemfundo Ezidingekayo yi-Illinois Cannabis Law
Yize awekho amaphuzu amaningi abhalwe ngqo ukufinyelela umphakathi, futhi kwezinye izimo amaphuzu amane nje angamabhonasi uma kwenzeka kuba nezibopho - okusho ukuthi kusafanele ukwenze. Uma ubophe futhi awuzange uyifake, kepha omunye ofake isicelo ukwenzile, inhlanhla enzima!
Lenzani ibhizinisi lakho le-cannabis ukubuyisa? Kunezinto eziningi ongazenza ukufundisa abantu, noma ukusiza labo abalimala ngomonakalo odalwe yimpi yezidakamizwa, noma omunye umuntu wesifazane, ingcosana, umakadebona noma iqembu elikhubazekile.
Izindleko zabasebenzi bakho be-Cannabis Dispensary
Abaphathi bemikhandlu kumele bagcine ibhizinisi lihamba kahle futhi ngokuvumelana nemithetho. Kufanele babhekane nabasebenzi, amakhasimende, abathengisi, abalawuli bezwe, abanikazi bebhizinisi, mhlawumbe nabatshalizimali. Zifunwa kakhulu ngenxa yokushoda embonini, kepha abaluleki balinganisela ukuthi kumtholampilo, izindleko zabasebenzi zonyaka zingangena ebangeni lesigidi samarandi. Ungathathi igama lethu ngakho, nasi isithombe esivela ku-COVA ngezindleko.
Kukhona kokubili ukuqala nokuqhubeka kwezindleko. Udinga ummeli, i-accountant, umxhumanisi wezokusebenza, futhi kufanele ube nomshuwalense ofanele. Izabelomali zonyaka zalezi zinhlobo ezingamashumi ezinkulungwane zamaRandi.
Hhayi i-SEO kuphela, ukuxhumana nabezindaba zenhlalo, idizayini nama-youTubes, ungaxhasa ngemicimbi yokufinyelela emphakathini ukwakha umkhiqizo wakho. Esikuthandayo ukuxhasa izingqungquthela zokuxoshwa kwabasebenzi kanye nemibukiso yemisebenzi ngokubambisana nezinhlangano zabameli bendawo, osopolitiki kanye nezinkampani zensangu. Khumbula ukwenza ibhajethi yalezi zinto ezinhlelweni zakho bese uzibekela kude nokuncintisana kwakho.
Ngakho-ke manje uyaqonda ukuthi kungani sithe kuzoba ngokwesilinganiso cishe ngama- $ 500,000 ukuvula i-cannabis dispensary e-Illinois. Asizange singene kuzo zonke izindleko zemishini yokukhula kwezobuciko ezingakhuphuka ngenxa yemishini kanye ne-HVAC ehlukahlukene, nokuphepha, izidingo zokwakhiwa kobuciko obukhulayo. Isilinganiso leso cishe sizoba ngamaki ka- $ 2,000,000 kepha kuya ngezici ukukhula okufuna ukukunikeza.